Kooxda Liverpool oo aqbashay in ay Philippe Coutinho iska iibiso janaayo | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kooxda Liverpool oo aqbashay in ay Philippe Coutinho iska iibiso janaayo
(11-10-2017)Kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay u soo bandhigtay naadiga reer Barcelona in ay iska iibineeso Philippe Coutinho marka la gaaro bisha Janaayo.
Xiddiga reer Brazil ayaa waxaa soo doontay Barcelona xagaagii lasoo dhaafay, laakiin waxaa la rumeysan yahay in Reds ay diiday seddex dalab oo ka yimid kooxda reer Catalan.
Warbixin baahsan ayaa sheegtay in dalabkii ugu sareeyay uu ahaa £ 100m, laakiin kooxda Merseyside ayaa istaagtay go,aan cad islamarkaana aysan iibineen kubadsameeyaha, kaasoo saxiixay qandaraas cusub oo muddo dheer ah bishii Janaayo.
Sida laga soo xigtay Mundo Deportivo, inkastoo ay xiiso u qabto Barcelona xagaagii, Liverpool ayaa heshiis la gaartay Coutinho kaasoo u ogolaan doona inuu ka tago Anfield bisha janaayo haddii loo helo dalab macquul ah.
Laakiin Barcelona ayaa la fahansan inay qorsheeneyso in suuqa bisha January aysan miiska u soo saari doonin kooxda Liverpool in ka badan 80 million euros, lagu daray aduuun kale ee gaarsiisan 30 million euros, oo ah lacagaha gunada, sababa la xidhiidha inuu kagala soo muuqday Liverpool xili ciyaareedkan Champions League, taasoo ka dhigeysa in Blugarana uusan kala qeyb gali Karin tartankan.
Ka dib dhaawacyo iyo qanac sanaan la,aan jirrta, 25 jirkaan ayaa lix kulan u saftay Reds, waxaana uu dhaliyay seddex gool islamarkaana uu caawiyay laba .